बाच्छा र जलजलामा नेकपाको प्रशिक्षण – MeroJilla.com
बाच्छा र जलजलामा नेकपाको प्रशिक्षण
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पर्वतले तल्लो तहमा संगठन सुदृढिकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
दुई पार्टी एकिकरण पछि साँगठानिक काम सुस्त रहेको अवस्थामा नेकपा पर्वतले स्थानिय तहमा भेला र प्रशिक्षणका काम सञ्चालन गर्न थालेको हो ।
अभियानका क्रममा आइतबार जलजला गाउँपालिकामा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ भने बिहादी गाउँपालिका वडा नं १ बाच्छामा पार्टी कार्यकर्ता भेला सम्पन्न भएको छ । बाच्छा गाउँ पार्टी संयन्त्रको आयोजनामा भएको भेलामा नेपाली कांग्रेस परित्याग गरि ९ जना कार्यकर्ता नेकपामा प्रबेश गरेका छन ।
जलजला गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि चार सम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई नेकपाको पछिल्लो अवस्था र आगामी कार्यदिशा र सरकारका गतिविधिका बारेमा प्रशिक्षण संचालन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका केन्द्रिय सदस्य गुप्त हमालले लामो संघर्षपछि मलुकले स्थायी सरकार पाएको बताउँदै अब मुलुक समृद्धि र विकास निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको बताए । हमालले सवैखाले राजनीतिक लडाईहरु सकिएकाले अब विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिमार्फ मुलुकको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेकपाका नेता तथा प्रदेश कमिटि सदस्य मेघनाथ सुवेदीले अब हरेक क्षेत्रको विकासलाई एकीकृत रुपमा अघि लैजानुपर्ने बताए । सो अवसरमा पार्टीका समग्र गतिविधि, पार्टीको केन्द्रिय र जिल्ला तहसम्मका आगामी कार्यभार, निति, बिचार र कार्यक्रमका बारेमा केन्द्रिय सदस्य गुप्त हमाल र बर्तमान सरकारका गतिविधि र कामबारे प्रदेश कमिटि सदस्य मेघनाथ सुवेदीले प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रममा नेकपाका नेतारु दुर्गा दर्जी, दिपक आचार्य, बाबुराम कार्की लगायतले पनि पनि मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै हिजो जलजलाको वडा नं. ५ र ६ मा अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण सम्पन्न भएको थियो ।
बाच्छामा नेकपा प्रवेश गर्नेहरुमा राजु क्षेत्री, खड्गबहादुर नेपाली, देवमाया नेपाली, रामकृष्ण नेपाली, गिता नेपाली, देवी सुनार, आरती सुनार, प्रकाश सुनार र नारायण नेपाली रहेका छन । नेकपा प्रवेश गर्नेहरुलाई जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर बिश्वकर्मा पौडेलले टिका लगाएर स्वागत गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट बिहादी गाउँपालिका वडा नं १ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधीको गलत रबैयाका कारण नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको बताएका छन ।
नेकपा बाच्छाका नेता गगनबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर बिश्वकर्मा पौडेल, नेकपा पर्वतका जिल्ला संयन्त्र सदस्यहरु भक्त कुवँर, गोबिन्द पहाडी, सविन गुरुङ्ग, बिहादी गाउँपालिका उपाध्यक्ष डम्बरकुमारी गुरुङ्ग, नेकपाका कुस्मा नगरसंयन्त्र सदस्य शंकर गिरी, नेकपा नेता नन्दु गुरुङ्ग, बैकुण्ठ क्षेत्री लगायतले सरकारका बिरुद्ध नेपाली कांग्रेस गलत अफवाह फैलाएको बताएका थिए ।